Princess Cruises Emerald Princess anodzoka kuzoshandira muUSA
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kurwisa » Princess Cruises Emerald Princess anodzoka kuzoshandira muUSA
Kuputsa Kufamba Nhau • Kurwisa • Hospitality Industry • Nhau Dzakanaka • nhau • vanhu • Kuvakazve • Resorts • Kutarisirwa • ushanyi • kutakura • Kufamba Wire Nhau • USA Kuputsa Nhau
Princess Cruises Emerald Princess anodzoka kuzoshandira muUSA.
Princess Cruises kufamba mungarava muEmerald Princess kunowanikwa kune vashanyi vakagamuchira dosi yavo yekupedzisira yeakagamuchirwa COVID-19 jekiseni mazuva gumi nemana isati yatanga rwendo uye vane humbowo hwekubaiwa.
Yekutanga chaiyo Emerald Princess vashanyi vakagamuchirwa pabhodhi nevashandi vane yakasarudzika ribhoni yekucheka mhemberero.
Emerald Princess yakarongerwa kusvika kuFt. Lauderdale muna Gumiguru 30, 2021 uye vachafamba nechikepe akateedzana mazuva gumi ePanama Canal cruises, kutenderera kubva kuFt. Lauderdale kusvika Zvita 10.
Emerald Princess crew majekiseni anoenderana neCDC nhungamiro.
Princess Cruises nhasi yaratidza kudzoka kusevhisi yechikepe chechitatu chengarava muUS - Emerald Princess - ichibva kuPort of Los Angeles munzira yePanama Canal yemazuva gumi kuenda kuFt. Lauderdale. Yekutanga chaiyo Emerald Princess vashanyi vakagamuchirwa pabhodhi nevashandi vane yakasarudzika ribhoni yekucheka mhemberero.
Kufamba nechikepe kubva kuPort of Los Angeles pane 15-mazuva ePanama Canal Cruise, Emerald Princess anodzoka kuzoshanda uye anotambira vashanyi vekutanga kudzoka mubhodhi.
Emerald Princess inopa MedallionClass zororo, ichipa kwekupedzisira mukuedza kusingashande, kwakasarudzika. Iyo Medallion inguva yechina-yakakura, inopfekedzwa chishandiso iyo inogonesa zvese kubva pakubata-isina bhodhi kuenda kunzvimbo yekuwana vadikanwa chero kupi muchikepe, pamwe nebasa rakakwidziridzwa senge kuva nechero vashanyi vanoda, kuendeswa kwavari chaiko, chero ivo vari muchikepe. Yakave ichizivikanwa seyakanyanya kupfeka chishandiso mumhepo yepasirese yekugamuchira vaenzi.
Princess Cruises kufambiswa kwechikepe cheEmerald Princess kunowanikwa kune vashanyi vakagamuchira dosi yavo yekupedzisira yevhavha yakabvumidzwa yeECVID-19 mazuva gumi nemana isati yatanga rwendo uye vane humbowo hwekubaiwa. Vese vakabaiwa vachena zvizere vanofanirwa zvakare kuburitsa yakaipa, yekurapa-yakacherechedzwa COVID-14 bvunzo (PCR kana antigen) yakatorwa mukati memazuva maviri ekutanga kwavo kwese kwePrincess kufamba. Majekiseni ejekiseni anoenderana neCDC nhungamiro.
Princess Cruises ndiyo yepasi rose premium cruise line uye yekushanya kambani inoshandisa ngarava gumi neshanu yemazuva ano ngarava, inotakura mamirioni maviri evashanyi gore rega rega kunzvimbo dzinosvika 14 kutenderera pasirese, kusanganisira Caribbean, Alaska, Panama Canal, Mexican Riviera, Europe, South America, Australia / New Zealand, iyo South Pacific, Hawaii, Asia, Canada / New England, Antarctica, uye World Cruises.